पढाइमा अब्बल नोभेल एकेडेमी, जसले पोखरामै पहिलोपटक एमबीए भित्रायो - Safal Awaj Safal Awaj
पढाइमा अब्बल नोभेल एकेडेमी, जसले पोखरामै पहिलोपटक एमबीए भित्रायो
पोखरा, ६ फागुन । नोभेल एकेडेमी पोखरामा मात्र नभई गण्डकी प्रदेशकै उत्कृष्ट कलेजका रुपमा परिचित छ । कलेजले स्थापनाको झन्डै २ दशकको यात्रा सफलतापूर्वक पार गरिसकेको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा–८, न्यूरोडमा भौतिक पुर्वाधारले सम्पन्न यो कलेजमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको पढाइ हुने गर्दछ ।
समयक्रम सँगै आफूलाई पनि अब्बल बनाउँदै गएको नोभेल एकेडेमी यसकारण पनि चर्चित छ, पोखरामै पहिलोपटक ए लेभलको शिक्षा भित्राउने श्रेय यसै कलेजलाई जान्छ । यसका अलावा निजी क्षेत्रबाट पोखरामै पहिलोपटक एमबीएको कक्षा पनि नोभेलले नै भित्राएकाे हो ।
सन् २००२ मा दर्ता भएको यो एकेडेमीले युनिभर्सिटी अफ क्याब्रिज इन्टरनेशनल युके, ब्रिटिस काउन्सिल, नेपालको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन एवं स्वीकृति लिई विभिन्न संकायमा पढाई संचालन गरिरहेको नोभेल एकेडेमी पोखराका संस्थापक अध्यक्ष तथा सीईओ विश्वेश्वर आचार्यले सफल आवाजलाई बताए ।
सीईओ आचार्यका अनुसार कलेजले अहिले स्नातकतर्फ बीबीए, ब्याचलर अफ फार्मेसी र ब्याचलर अफ नर्सिङका कार्यक्रम तथा स्नातकोत्तर तहमा एमबीएका कक्षा संचालन गरिरहेको छ । कलेजमा हाल ४६४ जना बिधार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन । कलेजबाट हालसम्म ४००० भन्दा बढी बिधार्थीहरु दिक्षित भईसकेका छन ।
कलेजले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कलेज तथा कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै विद्यार्थीलाई अब्बल बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । त्यसैले त यहाँबाट पास आउट भएका विद्यार्थी वेरोजगार बस्नु परेको छैन । पास आउट विद्यार्थीहरुले सरकारी, नीजि र कर्पोरेट हाउसमा रोजगार प्राप्त गरी उत्कृष्ट श्रेणीमा आफूलाई उभ्याएका छन् । कतिपय आफै उधमी बनेका पनि छन ।
कलेजले भारतको उत्तर प्रदेश कानपुरमा रहेको डा. गौरहरि सिंहानिया इस्न्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड रिसर्चसँग सहकार्य गरेको छ भने विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न खालका सेमिनार, गोष्ठी, अन्तरक्रियामा सहभागी गराउँदै आएको कलेजका कार्यकारी निर्देशक सीता लामिछानेले बताइन् ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धनप्राप्त कलेजले हालैमात्र एमबीए र बीबीएको नयाँ सेसनको लागि भर्ना खुलाएको छ । कलेजका अप्रेसन म्यानेजर दिनेश भण्डारीका अनुसार एमबीएतर्फ भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले कुनै पनि संकायमा ४५ प्रतिशत वा २.० सीजीपीए ल्याएको हुनुपर्नेछ । वर्षमा दुई सेसनमा ३०-३० जना विद्यार्थीको लागि भर्ना खुलाइन्छ । त्यो हो–स्प्रिङ र फल्स सेसन । अहिले खुलिरहेको भर्ना सन् २०२१ को स्प्रिङ सेसनको लागि हो ।
यस्तै, बीबीएको लागि वार्षिक ४० सिटमा भर्ना लिइने गरिन्छ । सन् २०२१ को लागि नयाँ भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षा कलेजमै फागुन १८ मा हुँदैछ । बीबीए पढ्न चाहना राख्ने विद्यार्थीले पनि प्लस टुमा ४० प्रतिशत वा २.० सीजीपीए ल्याएकाे हुनुपर्नेछ ।
कलेजले सैद्धान्तिकभन्दा विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षण विधि अपनाउने हुँदा पोखरा र यस क्षेत्र आसपासका विद्यार्थीका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको पढाइ संचालन गरेर विद्यार्थीलाइ ठूलो गुन लगाएको छ ।
हामी ग्लोबल नेटवर्कमा छौं
संस्थापक अध्यक्ष तथा सीईओ, नोभेल एकेडेमी
नोभेल एकेडेमी यस क्षेत्रको उत्कृष्ट कलेज हो । स्थापनादेखि हालसम्म आइपुग्दा कलेजले थुप्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । उत्पादित विद्यार्थीहरु वेरोजगार बस्नुपरेको छैन । प्रतिष्ठित व्यापारिक संघसंस्थाहरु, कर्पोरेट हाउस, बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुबाट आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि कलेजमा माग भइरहन्छ ।
विद्यार्थीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि दिनरात नभनी लागिपरेका छौं । समय समयमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरुसँग बिद्यार्थीलाई तालिम, मोटिभेसनल कक्षा, गोष्ठी, भिजिटिङ फ्याकल्टीमा सहभागी गराउँदै आएका छौं । कोभिड–१९ को बेलामा पनि हामीहरुले भर्चुअल्लीरुपमा ४०-५० वटा सेमिनार गर्यौं । हामी ग्लोबल नेटवर्कमा छौं ।
कोभिडको प्रभावले नयाँ व्यवसाय गर्न गाह्रो हुने भएकोले कलेज र कर्पोरेट हाउसबीच के–कसरी जान सकिन्छ भन्नेबारे अन्तरक्रिया गर्ने गरेका छौ । विद्यार्थीलाई जागिरभन्दा पनि उद्यमी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी बढी केन्द्रित छौं । यहाँ पढ्ने विद्यार्थीलाई जागिरको कुनै समस्या छैन । अर्गनाइजेसनले मागेको बेलामा पुर्याउन नसकेको अवस्था पनि छ । एमबीए तथा बीबीएको कोर्समा प्रचूर सम्भावना छ । त्यसैले धेरैको रोजाइको कलेज नोभेल बनेको छ ।
हामी सैद्धान्तिक भन्दा बढी व्यवहारिक ज्ञान सिकाउँछौं
डा. श्रीनिवास माधवन
एमबीए कोअर्डिनेटर,नोभेल एकेडेमी
एमबीए प्रोफेसनल कोर्स हो । करिअर विकासका लागि ग्राजुएट मात्र गरेर पुग्दैन । अहिलेको समयमा प्रोस्ट ग्राजुयट आवश्यक छ । मार्केटमा कम्पिटिसन छ । नेपालमा कर्पोरेट कल्चरको विकास भइसकेको छ । त्यसकारण पनि एमबीएको महत्व झनै बढेको पाइन्छ ।
कुनै पनि विषयमा ग्राजुयसन गरेको विद्यार्थीले नोभेल एकेडेमीमा एमबीए पढ्न पाउछन । यो २ वर्षे कोर्स हो । यो कोर्स पढाउने शिक्षक प्रोफेसनल हुनुहुन्छ ।
पीएचडी पूरा गरेका तथा एमबीए होल्डर हुनुका साथै ठूला ठूला कर्पोरेट सेक्टरमा आबद्ध रहेकाहरुले पनि यहाँ शिक्षण गर्नुहुन्छ । हामीहरु सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र नभइ बढी व्यवहारिक ज्ञान सिकाउँछौं । विद्यार्थीको करिअर बढाउन यो कोर्स निकै सहयोगीसिद्ध छ ।